Dumbbell Row - Tingaiite Sei Nazvo | Bezzia
Susana godoy | 27/04/2021 16:00 | Exercise
Iwe unoziva here kuita dumbbell mutsara? Zvirokwazvo mhinduro ichave hongu, nekuti pamwe, pane imwe nguva kana imwe, iwe wakadaro. Asi hazvisi nguva dzose mukuzviita chete asi pakuzviita nemazvo. Saka nhasi tichaona zvese zvakanaka nezve kurovedza muviri uye nemabatiro atinofanira kuzviita.
Nokuti kukwasva ndechimwe chezviitwa zvakakwana zvatakaita. Naizvozvo, iri pakati pevakuru vakuru uye kugara uchifunga nezvazvo. Nhamba hombe yemhasuru inoitwa uye izvo zvinogara zvichive bhenefiti huru kumuviri wedu. Hautendi here? Ipapo usapotsa zvese zvatiri kuda kukuudza.
1 Maitiro ekuita dumbbell mutsara, chinzvimbo
2 Ita kufamba kwacho nenzira kwayo
3 Rovedza ruoko rwako uyezve yako scapulae
4 Maoko ako nemagokora ndivo protagonists
Maitiro ekuita dumbbell mutsara, chinzvimbo
Kutanga isu tinofanirwa kusimuka uye kuvaparadzanisa zvishoma, pakukwirira kwechiuno. Ino ndiyo nguva yekubata dumbbell mune yega ruoko uye kukotamisa mabvi ako zvishoma. Rangarira kuisa mutumbi kumberi kumberi, asi gara uchichengeta musana wakatwasuka, asi uchengetedze chimiro chayo, ndiko kuti, pasina kusanganisa mutsipa zvakanyanya. Gara uchitarisa wakatarisana nevhu uye panzvimbo yakatarwa. Kamwe nechinzvimbo chakakodzera, ipapo tinogona kutanga nekurovedza muviri. Izvo zvakakosha kuti usamanikidze chero kufamba. Nekuti izvi zvinogona kuita kuti musana wako utambure. Saka zvakakosha kugara uchitanga nehuremu hushoma uye kuwedzera, zvakafanana nekudzokorora kwetambo yedu.
Ita kufamba kwacho nenzira kwayo
Zvino, nemamiriro uye zvimisikidzo zviri mumaoko, isu tinofanirwa kuita kufamba kwekuchinjisa maoko. Asi isu hatizozviita nenzira yakatwasuka kana kukwira kumusoro, nekuti izvo zvinogona kukonzera mamwe matambudziko. Zvirinani kupa kufamba uku kutenderera tenderera pane kutarisa pane iyo yakatwasuka mutsara iyo yatinowanzoita kekutanga nguva patinoitisa. Iwe uchaunza iyo dumbbell kudivi asi iwe unodzivirira kuti ruoko ruri munzvimbo ino ruchaita kona isingasviki 90º.
Rovedza ruoko rwako uyezve yako scapulae
Mune chero kurovedza muviri kwakakosha munyu, chimwe chezvinhu zvekutanga zvatinofanira kuita chimiro, ichokwadi. Asi ipapo iyo kumisikidza iyo musimboti kunotibatsira zvakanyanya. Saka mune dumbbell kukwasva iye aisazosiiwa kumashure futi. Kana izvi zvangoitwa, ikozvino kunouya chimwe chikamu chakakosha kunova kusimudza ruoko uchitarisawo kune scapulae. Zvakanakisa pane zvese kubheja pakuvanzwa, pakuvabvumirana. Asi hongu, edza kusachinja trunk. Ndokunge, isu tinofanirwa kuchengetedza chinzvimbo chekutanga chatataura. Kuti uite izvi, mafambiro acho haafanire kuve chero chinhu kamwe kamwe asi zvakapesana chaizvo. Zvirinani kusvikira tanyatsoziva hunyanzvi, ipapo ivo vanozobuda vega.
Maoko ako nemagokora ndivo protagonists
Patinobata huremu, tinogara tichida kudhonza pamaoko edu kana mawoko sekunge pasina ramangwana. Kuwana imwe bharanzi kwakaoma, asi tichazviita. Nekuti, isu tiri pachena kuti kana tikadhonza maoko edu kana kushandisa simba rakawandisa pairi, tinogona kukuvadza maoko. Saka, mune ino nyaya zvatichaita zvichave zvese zvegokora kwete maoko. Vachave protagonists uye vachatityaira isu mukufamba kwavo uye voita simba rakawanda kupfuura maoko. Ipapo chete, nepfungwa iyi uye nekuchengetedza mamiriro akakwana, tinozowana mibairo mikuru. Nekudaro, isu tinofanirwa kutarisa kwese kushanda kwedu kumagokora, kunyangwe sezvatinotaura, dzimwe nguva hazvisi nyore. Pamusoro pazvose, nekuti neiyi nzira, isu tinoshanda musana wedu zvakanyanya, isu tichiutarisira. Nenzira imwechete iyo maoko, magokora uye scapulae zvakare zvichave nezvakawanda zvekutaura. Uye iwe, unoita sei iyo dumbbell mutsara?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Utano » Exercise » Maitiro Ekuita iyo Dumbbell Row Zvakakodzera
Bhenefiti uye zvivakwa zvekonjac mudzi